MicroG chirongwa chekudzivirira Android kubva pakuva yakazvimirira inoshanda sisitimu | Linux Vakapindwa muropa
Android, Google's mobile operating system inogona kunge iri sisitimu inoshandiswa zvakanyanya munyika. Google's operating system Haisi chete yakavhurwa sosi, asi zvakare yakavakirwa paLinux kernel.
Saizvozvo, vazhinji vanotarisira kuti sisitimu ichave yakavhurika uye yemahara, asi zvinosuwisa, zvinoita sekunge kwete. Dzimwe nhengo dzenzvimbo yeApple vanonetsekana kuti Android ichave yeanoshanda nzira yekushandisa munguva refu.
Kugadzirisa izvi, vamwe vauya pamwechete kuti vashandise iyo microG chirongwa iyo inotarisira kuitiswa zvachose maapplication nema raibhurari kubva kuGoogle mushandisi nzvimbo yeGoogle.
1 MicroG yakavakirwa pakuchengeta Android yakavhurika sosi
1.1 Sevhisi Core kana GmsCore
1.2 Sevhisi Sisitimu Proxy GsfProxy
1.3 Mepu v1
MicroG yakavakirwa pakuchengeta Android yakavhurika sosi
Zvadaro, Iyo microG timu yakatsanangura kuti zvimwe zvakakurumbira kunyorera, kunyangwe iri yakavhurwa sosi, izvozvi zvinoda kuiswa kweGoogle zvivakwa maraibhurari.
Yakawedzerwa kune zvese izvi matambudziko akakomba muGoogle's zvine chekuita nesoftware zvakawanikwa uye zvataurwa neiyo Android mod nharaunda.
Naizvozvo, vakatsanangura, mamiriro aya akaita kuti vatange kuvandudza "dombo" reGoogle software yekushandisa uye maraibhurari.
Iyo projekiti inonzi microG uye chinangwa chikuru ndechekuunza kunharaunda yeApple kuvhurika uye kwemahara kuitiswa kwemaraibhurari makuru uye kunyorera kwechirongwa.
Sekureva kwechikwata, kunyangwe mazhinji acho emagetsi ari kure nekupedzisa, mhedzisiro yacho inoshamisa.
Izvi zvinobvumidza vashandisi vemahara software kuti vabatsirwe yakafara rutsigiro rwezvishandiso zvako. Zvekuvanzika-vanoziva vashandisi vanogona kudzora kana kudzora data rinotumirwa kuGoogle
Kunyanya, nhare dzakura dzinogona kutarisira kuvandudzwa muhupenyu hwebhatiri, microG haina kungoshandiswa mumidziyo chaiyo, inotsiva maturusi eGoogle mune emulators emuedzo uye inotoshandiswa mune chaiyo nhare mbozha.
Munharaunda, microG inoonekwa se "yakanakisa chirongwa". Kune vamwe, microG ichava sarudzo inobatsira mumakore anotevera ekudzora zvakawanda zvinodiwa neGoogle uye nemutemo wayo wekuvharira vechitatu-bato kunyorera mune Android ecosystem.
Ivo vanopa iwo muenzaniso weLineageOS iyo inotoshandisa kumwe kuita kweGMG. LineageOS ye microG chiitiko chakazara cheApple pasina Google Apps.
Sezvo inosanganisira yemahara microG kuitiswa kweanoshandisa uye maraibhurari ayo ane yeGoogle Android mushandisi nzvimbo. Izvi zvinokutendera kuti ushandise ese masevhisi eGoogle aunoda iwe pasina kuchengetedza nzvimbo yakavharwa pane yako Android system.
Heano akasiyana zvikamu zveiyo microG chirongwa.
Sevhisi Core kana GmsCore
GmsCore, ndizvo application raibhurari iyo inopa iko kunodiwa mashandiro ekumhanya mafomu anoshandisa Google Play masevhisi kana Google Mepu Android API (v2).
Mune mamwe mazwi, iko kwemahara uye kuvhurwa kuitiswa kweiyo Google Play sevhisi sosi. Inotendera zvinoshandiswa zvinotsvaga Google APIs yakasarudzika inomhanya pane AOSP-based ROMs senge Replicant uye LineageOS.
Sekutsiva kwenzvimbo yakavharwa ye Google Apps (GAPPS), chishandiso chine simba chekuwanazve yako zvakavanzika uchinakidzwa neakanyanya maficha eApple.
Iyo GmsCore app ine akawanda maficha anosanganisira: gonesa Google masevhisi uye wedzera rutsigiro rweapp, kupa online / isingawanikwe nzvimbo, shoma bhatiri, ndangariro uye processor kukanganisa uye inomhanya pane chaiko zvishandiso, bvunzo emulators uye chaiyo nhare mbozha.
Zvakare, ndeye mahara uye yakavhurwa sosi uye haidi chero bloatware.
Sevhisi Sisitimu Proxy GsfProxy
GsfProxy iri chidiki diki icho chinobvumira kunyorera kugadzirirwa mameseji Google Cloud kuChidimbu (C2DM) shandisa sevhisi yekutumira mameseji inoenderana neGoogle Cloud izvo zvinopihwa neGmsCore.
Iyo Yakabatana Network Nzvimbo Inopa (UnifiedNlp) raibhurari iyo inopa nzvimbo-yakavakirwa Wi-Fi uye masero tora ezvishandiso uchishandisa Google's network nzvimbo mupi. Inosanganisirwa muGmsCore, asi inogona zvakare kushanda yakamira pane akawanda maApple masystem.
Mamepuv1 Mamepu API raibhurari yesystem iyo inopa mashandiro akafanana neiyo Google Mepu API (v1), parizvino yakadzikiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » MicroG chirongwa chekudzivirira Android kubva pakuva yakazvimirira inoshanda sisitimu
Inonakidza kwazvo, ndaiziva kuti LineageOS yaivepo uye kuti maGoogle maapps aigona kuiswa zvakasiyana kuburikidza nepicoApps, asi ini ndaisaziva kuti MicroG yaivepo kutsiva Google maapp.
Kubva pane zvandinoona "Lineage Os yeMicroG" iri forogo ye LineageOS iyo inoshandisa MicroG nekumira, uye izvo zvinounza chitoro cheF-droid nekutadza, asi izvi zvinogona kugadziridzwa kuburikidza neiyo Playmaker repository kurodha kunyorera kubva kuGoogle Play.
Ndiri kureva zvinoenderana neizvozvo iwe unokwanisa kuwana iyo Google Play kunyorera, usina Gapps. Iye zvino handizive kana Huawei aigona kushandisa chimwe chinhu chakadai.
Iyo yepamberi uye yakapusa microg inosimudza ndeye nanodroid
Mune teregiramu chiteshi uye boka @NoGoolag mune vatungamiriri uye rubatsiro
Assange akapomerwa mhosva gumi nenomwe dzekutyora mutemo wespionage
ARM inomisa kuendesa kuHuawei nekuda kwezvirango zveUS.